प्रहरी आएर क’पडा खो’लि श्रीमती माथि च’ड्दै गरेको देखेपछि श्रीमानले जे गरे ….(भिडियो सहित) |
January 13, 2021 January 13, 2021 adminLeaveaComment on प्रहरी आएर क’पडा खो’लि श्रीमती माथि च’ड्दै गरेको देखेपछि श्रीमानले जे गरे ….(भिडियो सहित)
भक्तपुर । प्रकाश राई । घर भोजपुर । हाल भक्तपुरमा बस्दै आईरहेका उनी र उनको श्रीमतीमाथि प्रहरीले नै गर्यो यस्तो घि’नला’ग्दो व्य’वहार । उनले सुनाए त्यो रातको घि’नला’ग्दो र कसैले पनि सोच्नै नसक्ने पि’डाको कुरा । ‘म र मेरी श्रीमती काम गरेर थाकेका थियौं । उनी भुसुक्कै निदाईन् । म भने यहाँको सामानाको चौकीदारी गर्नु पर्ने भएको हुनाले एक रा’उण्ड ल’गाउन गएको थिएँ ।
त्यत्किैमा याहाँ खाना पाकउने एक जना दाईले मलाई ह’स्यांग फ’स्यांग गर्दै बोलाउनु भयो ।’यतिसम्म भन्दा पनि प्रकाशले अकमाईरहेका थिए । तर पनि उनले आफ्नो पि’डा त कसैलाई भन्नै पर्ने थियो । त्यसैले उनले हिम्मतका साथ यसरी भने,‘जब म आएँ तब त्यो मान्छेको माथिको लुगा सबै ठीक थियो तर तलको चाही घँुु’डासम्मै फु’केको थियो । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
अनि मेरो श्रीमतीको पनि त’लको लु’गा फु’काले’र तल घुँ’डासम्म नै ल्याएर………..थियो ।’ आफ्नै श्रीमतीको यस्तो कुरा कुनैपनि श्रीमानले कसैको पनि सामुन्ने भन्न सक्दैन । तर प्रकाशले त हिम्मत गरे ।उनले अगाडी घटनाको विषयमा यसरी भन्दै गए,‘त्यत्ति छिट्टै त उस्ले गरेको होईन होला तर जे होस् गर्ने कोशिश गर्दै गर्दा म आईपुगें । उस्ले त्यस्तो गर्दासम्म मेरो श्रीमती निन्द्रामै थिई ।
उ धेरै थाकेको पनि थिई ।’ प्रकाशको भनाई अनुसार उनको श्रीमतीलाई त्यस्तो गर्ने त्यो व्यक्ति उनले काम गर्ने ठाउँमा सिविल ड्रेसमा आईरहने प्रहरी हो रे । त्यसरी आउने क्रममा सामान्यत कुराकानी कुराकानी हुने गथ्र्यो । तर त्यो व्यक्तिले त प्रकाशको अवस्था देखेर त्यस्तोसम्म गर्न भ्याएछ । यो समाचारको भिडियो यो तल राखिएको न्युजको तल छ थोरै तल झरेर पुरा भिडियो हेर्नुहोला :
विवाह अघि सबै युवतीहरुले यी बानीहरू त्याग्नु पर्छ
अब लाइसेन्स ट्रायलमा सामान्य यस्ता गल्तीले फेल नहुने!सबै पास हुन सक्ने
BREAKING:एकाबिहानै ३ करोड नेपालीको दिमाग हल्लाउने खबर बाहिरियो।पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला
रुकुम घटना सेलाउन नपाउदै गोरखामा अर्को घटना,दुबईबाट श्रीमानले फोनमा बोलेको १५ मिनेटपछि ……(भिडियो)
खुसिको खबर:सोच्नै नसकिने गरी ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य! January 18, 2021
३० बर्ष पुरानो ग्यास्टिक पनि तुरुन्तै निको पार्ने घरेलु ओेैषधी(भिडियो हेर्नुहोस्) January 18, 2021
ससुराली आएका ज्वाइँले लगाए ससुराली घरमा आगो।कारण अचम्म्को January 18, 2021